पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य
पाठ ३—पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य
पुनर्जीवन परमेश्वरको त्यो कार्य हो जसमा परमेश्वरले पापमा मरेको मानिसलाई आफ्नो जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ। जीवन प्रदान गर्ने कार्य पवित्र आत्माको हो: “...किनकि लेखले मार्छ, तर आत्माले ____________ दिनुहुन्छ” (२ कोरिन्थी ३:६)। पापीले जीवन पाउने मात्र होइन, तर उसले परमेश्वरको परिवारमा जन्म पनि लिन्छ। पुनर्जीवनको सम्बन्धमा चाबी खण्डहरूमध्ये एउटाचाहिँ यूहन्ना ३ अध्याय हो।
यूहन्ना २ अध्यायको अन्ततिर एक किसिमका मानिसहरूको बारेमा उल्लेख छ। त्यहाँ बताइएको छ, “धेरैले उहाको नाममा ______________ गरे” (यूहन्ना २:२३)। यी मानिसहरूले किन विश्वास गरे? (यूहन्ना २:२३ पढ्नुहोस् र सही उत्तरमा चिन्ह लागाउनुहोस्)
तिनीहरू येशूलाई प्रेम गर्थे। आफ्ना पूरा हृदयले उहाँलाई पछ्यागउन चाहेका हुनाले यी मानिसहरूले विश्वास गरका थिए।
तिनीहरूको विश्वास आँखाले देखका आश्चर्यकर्महरूमा थियो! “विश्वास” गर्ने उक्त समूहलाई देखेर के येशू गदगद हुनुभयो? “वाह! क्या राम्रो! मेरो पछि लाग्ने यी सबलाई हेर त!” के उहाँले यसरी भन्नुभयो? अहँ, उहाँको प्रतिक्रिया यसको ठीक विपरित थियो: “तर येशूले आफैलाई तिनीहरूको ____________मा छोड्नुभएन” (यूहन्ना २:२४)।
यूहन्ना २:२३ को “विश्वास” र यूहन्ना २:२४ को “भरोसा” ग्रीकमा एउटै शब्द हुन्। यी पदहरूलाई यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ, “धेरैले येशूलाई विश्वास गरे, तर येशूले उनीहरूलाई विश्वास गरिरहनुभएको थिएन। उहाँमाथि तिनीहरूको विश्वास थियो (आश्चर्यकर्महरू देखेका हुनाले) तर उनीहरूप्रति उहाँको विश्वास थिएन!” उनीहरूको भर छैन भनेर येशू जान्नुहुन्थ्यो किनभने “उहाँले सबै मानिसहरूलाई ___________________”(यूहन्ना २:२४)। नथनएलको बारेमा सब जान्नुहुने येशूले यी मानिसहरूको बारेमा पनि सब जान्नुहुन्थ्यो। विश्वास गर्नेहरूझैं प्रस्तुत भइरहेका यी मानिसहरूलाई उहाँले मन खोलेर ग्रहण गर्नुभएन किनभने “मानिसभित्र के हुन्छ, सो उहाँलाई ________ ________”(यूहन्ना २:२५)। उहाँ यी मानिसहरूको एक-एक कुरा जान्नुहुन्थ्यो। उनीहरूको हृदय परमेश्वरको दृष्टिमा ठीक छैन भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। उनीहरूसँग विश्वास थियो तर येशूले खोज्नुभएको जस्तो विश्वास थिएन। उनीहरूले नयाँ जन्म पाउन खाँचो थियो!
उनी एक शासक थिए (यूहन्ना ३:१)। उनी एक साधारण यहूदी मात्र थिएनन्, तर यहूदीहरूका एक अगुवा थिए। उनी सनहेड्रीन भनिने देशको सर्वोच्च शासकवर्गको एक सदस्य थिए (यूहन्ना ७:४५ -५० पढ्नुहोस्)। उनी उच्च ओहोदाका व्यक्ति थिए।
उनी एक गुरू अर्थात् शिक्षक थिए (यूहन्ना ३:१०)। उनी अज्ञानीलाई ज्ञान दिन सक्ने एक विज्ञ मानिन्थे। तर अरूलाई सकाउने भएर पनि निकोदेमस आफैले सिक्न खाँचो थियो। उनले सर्वोत्कृष्ट शिक्षकबाट “नयाँ जन्म” को बारेमा सिक्न खाँचो थियो (यूहन्ना ३:२)।
निकोदेमस एक फरिसी , एक शासक र शिक्षक थिए तर उनी नरकको बाटोमा हिँड्दै थिए। निकोदेमसले मुक्ति पाएका थिएनन्। निकोदेमससँग अनन्त जीवन थिएन। धेरै कुराहरू भएर पनि निकोदेमससित सबभन्दा ठूलो कुरा थिएन। निकोदेमसलाई येशूको सन्देश स्पष्ट थियो: “कोही मानिस ________ गरी ____________ भने उसले परमेश्वरको _________लाई देख्नर सक्दैन” (यूहन्ना ३:३)। राज्यभित्र प्रवेश गर्न केवल एउटै उपाय छ, अर्थात्, नयाँ गरी जन्मनैपर्छ!
नयाँ गरी जन्मनुको अर्थ के हो?
स्वर्ग जानलाई पैसा चाहिँदैन। स्वर्ग जानलाई पढाइ चाहिँदैन। स्वर्ग जानलाई पद चाहिँदैन। तर स्वर्ग जानलाई एउटा कुरा चाहिन्छः त्यो हो, नयाँ जन्म! जसले नयाँ जन्म पाएका छैनन् उनीहरूले परमेश्वरको राज्य कहिल्यै देख्नेतछैनन् (यूहन्ना ३:३)।
येशूले निकोदेमसलाई यूहन्ना ३:५-६ मा दिनुभएको जवाफलाई पढ्नुहोस्। येशूले प्रस्ट पार्नुभयो, कि उहाँले शारीरिक होइन तर आत्मिक जन्मको कुरा गर्दैहुनुहुन्छ (“आत्माबाट जन्मिएको”)। मानिसको पहिलो जन्म शारीरिक हुन्छ (“शरीरबाट जन्मिएको”) अनि मानिसको दोस्रो जन्म आत्मिक हुनुपर्दछ (“आत्माबाट जन्मिएको”)। योचाहिँ परमेश्वरको आत्माले गर्नुहुने एउटा काम हो।
मानिस पानी र आत्माबाट जन्मनुपर्छ (यूहन्ना ३:५) भन्ने येशूको भनाइको अर्थ के थियो? बाइबलको यस पदलाई धेरैजनाले गलत बुझेका छन्। “पानी” ले पानीको बप्तिहस्माको अर्थ दिन्छ भनी विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्। उनीहरू भन्छन्, “तिमीले पानीको बप्तिपस्मा लिएनौ भने परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैनौ र मुक्ति पाउन सक्दैनौ।” यो सत्य होइन। पानीको बप्तिनस्मा महत्त्वपूर्ण छ तर पानीको बप्तिवस्माले कसैलाई मुक्ति दिँदैन। पानीको बप्तिछस्मा मुक्ति पाइसकेको व्यक्तिले गर्ने एउटा काम हो।
येशूले भौतिक पानीको कुरा गर्नुभएको होइन। भौतिक पानीले मानिसको बाहिरी अंगहरूलाई मात्र शुद्ध पार्न सक्छ। यूहन्ना ३:५ मा येशूले आत्मिक शुद्धिकरण (मानिसको भित्री शुद्धिकरण) को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाहिर सफा बन्न नुहाउनुपर्छ, साबुन र पानी चाहिन्छ। भित्र सफा बन्न अर्कै प्रकारको स्नान चाहिन्छ। साबुन र पानीले पापको मैला हटाउन सक्दैन। परमेश्वरले नै मानिसभित्र एउटा काम गर्न खाँचो छ। पानी र आत्माबाट जन्मने बारेमा बाइबलले के भन्छ, हेरौं।
पानी जुनै पनि चीज धुन प्रयोग गरिने पदार्थ हो। पानी सर्वत्र प्रयोग हुने सरसफाइको साधन हो। भुइँ सफा गर्दा तपाईं के प्रयोग गर्नुहुन्छ? ________। मुख केले धुनुहुन्छ ? ________। कपडा केले धुनुहुन्छ ? _______। दाँत सफा गर्न तपाईं मन्जन मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न, तर ________ पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। पानीचाहिँ शुद्धिकरण (कुनै चीजलाई शुद्ध पार्ने काम) को चित्रणको रूपमा लिन सकिने कुरा हो भनेर हामी सजिलै बुझ्छौं।
पापी हरू धोइन र शुद्ध पारिन आवश्यक छ। येशू निकोदेमसलाई एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहनुहुन्थ्यो: कुनै पनि अशुद्व मानिस परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन! परमेश्वर भन्नुहुन्छ, कुनै पनि अशुद्व मानिसले ख्रीष्टको र परमेश्वरको _________मा कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउनेछैन (एफेसी ५:५, गलाती ५:२१, प्रकाश २१:२७ मा पढ्नुहोस्)। राज्यमा पस्न एक व्यक्ति भित्रबाट नै शुद्व र धोइएको हुनुपर्छ अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएको हुनुपर्छ। नधोइएको व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध छ। कुनै पनि अशुद्व व्यक्ति परमेश्वरको राज्यमा पस्नेछैन। केवल शुद्ध पारिएका पापीहरूलाई मात्र स्वर्गमा पस्न दिइनेछ। तपाईं पानीबाट जन्मनैपर्छ! तपाईं धोइनैपर्छ!
१ कोरिन्थी ६:९-१० पढौं। के कुनै अशुद्ध अर्थात् अधर्मी मानिस परमेश्वरको राज्यका हकवाला हुनेछन्? ______________। के धोइएका पापीहरू त्यस राज्यमा पस्नेछन् (१ कोरिन्थी ६:११)? ______________।
जतिखेर तपाईं यूहन्ना ३:५ लाई विचार गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईंले तीतस ३:५ लाई पनि विचार गर्नुपर्छ। यी दुवै पदहरू तेस्रो अध्यायको पाँचौं पदमा छन्, त्यसकारण यिनीहरूलाई सम्झन सजिलो छ। यी दुवै पदहरूले नयाँ गरी जन्मने बारेमा बताउँछन् (तीतस ३:५ मा पनि नयाँ जन्मको कुरा छ)। यी दुवै पदहरूले पानी र आत्माको बारेमा बताउँछन्। तीतस ३:५ मा हेरौं: “तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपाअनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो--नयाँ जन्मको _________द्वारा (यो भयो पानी) र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा (यो भयो आत्मा”)। नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति त्यो हो जो परमेश्वरको आत्माद्वारा पूरै शुद्ध अनि नवीकृत भएको छ।
यूहन्ना १३:५ मा उल्लेखित पानीको विचार गरौं। येशूले एउटा महत्त्वपूर्ण आत्मिक सत्यता दर्शाउन पानी शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। के पत्रुस एउटा “धोइएका” चेला थिए? के पत्रुस भित्रदेखि शुद्ध थिए (यूहन्ना १३:९ -१०)? ________। कुनचाहिँ चेला पानीबाट जन्मेको थिएन? कुन चेला नधोइएको हुनाले अशुद्ध थियो अर्थात् नयाँ गरी जन्मेको थिएन (यूहन्ना १३:१० -११ र यूहन्ना १३:२लाई आपसमा तुलना गर्नुहोस्)? ____________________________। के ऊ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ? ____________।
एफेसी ५:२५ -२६ मा पनि यस पानी को उल्लेख छ, “ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, र त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो -- त्यसलाई ___________द्वारा _______को _________ले पवित्र पार्नालाई।” एक व्यक्ति कसरी धोइन्छ? वचनद्वारा!
परमेश्वरको वचन शुद्धिकरण (शुद्ध गर्ने काम) को निम्ति नभई नहुने कुरा हो। परमेश्वरको वचन ऐना हो जसले हामीलाई हामी बास्तवमा कति अशुद्ध छौं भनेर हाम्रो पाप देखाउँछ। बाइबलले हाम्रो पाप मात्र देखाउँदैन, यसले पापीका एउटै मुक्तिदातालाई पनि देखाउँदछ। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्तिदाताले बचाउनुहुनेछ भन्ने उहाँका प्रतिज्ञाहरूलाई पनि बाइबलले देखाउँदछ। परमेश्वरको वचनबिना एक व्यक्तिले कहिल्यै मुक्ति पाउन सक्ने थिएन, कहिल्यै नयाँ गरी जन्मन सक्ने थिएन। निम्नलिखित पदहरूले परमेश्वरको वचनको ‍महत्त्वलाई दर्शाउँदछन्:
भजनसंग्रह ११९:९ - “एउटा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी __________ राख्नेछ? तपाईंका ____________मा ध्यान दिएर नै हो।“
यूहन्ना १५:३ - “मैले तिमीहरूलाई भनेको ____________द्वारा तिमीहरू __________ छौ।“
१ पत्रुस १:२३ -२५ - “किनकि नाशहुने होइन, तर नाश नहुने बीउबाट ______________को जिउँदो र सँधैभरि रहने ____________द्वारा ________________छौं।”
याकूब १:१८ - “उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको ____________द्वारा जन्माउनुभयो।”
निकोदेमस एक यहुदी थिए जसलाई पुरानो नियमको पूरा ज्ञान हुनुपर्थ्यो। यूहन्ना ३:९ मा हामी देख्दछौं कि येशूले कुन विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर निकोदेमसले अझै बुझेका थिएनन्। यूहन्ना ३:१० मा येशूले निकोदेमसलाई यी कुराहरू उनले अघिबाट नै जानेको हुनुपर्थ्यो भनी भन्नुभयो। उनले पानी र आत्माको बारेमा बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। उनलाई इजकिएल ३६:२५-३९ राम्रैसँग थाह हुनुपर्थ्यो। के यहाँ पानीको उल्लेख छ? ________। के यहाँ शुद्ध हुने र शुद्ध पारिने विषय उल्लेख छ? _______। यस खण्डमा परमेश्वरले मानिसभित्र एउटा अचम्मको काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो (इजकिएल ३६:२६ -२७)। यर्मिया ४:१४ र यशैया १:१६ पनि पढ्नुहोस्।
नयाँ जन्म कसरी सम्भव छैन
तपाईं शारीरिक जन्मद्वारा आफ्नो परिवारको सदस्य बन्नुभयो। पहिलो जन्मद्वारा तपाईं आफ्ना बाबुआमाको छोरा वा छोरी बन्नुभयो। जब कुनै मानिस नयाँ गरी जन्मन्छ, ऊ परमरश्वरको घरानाको सदस्य बन्दछ अर्थात् परमेश्वरको सन्तान (यूहन्ना १:१२) बन्दछ। कुनै पनि व्यक्तिले नयाँ जन्म कसरी पाउँदैन भन्ने विषयमा यूहन्ना १:१३ मा तीनओटा कुराहरू बताइएको छ।
(१) "न ता रगतबाट"
बाबुआमा र छोराछोरीको बीचमा रगतको नाता हुन्छ अनि थुप्रै कुराहरु छन् जुन बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई दिन सक्छन्, जस्तै, आँखाको रंग, कपालको रंग, अनुहारका आकारहरू, शरीरको बनावट आदि। तर त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कहिल्यै दिन सक्दैनन्, त्यो हो नयाँ जन्म। तपाईंका आमाबाबुले तपाईंलाई पहिलो जन्म दिन सक्नुहुन्छ तर उनीहरूले तपाईंलाई दोस्रो जन्म दिन कहिल्यै सक्दैनन्।
ख्रीष्टियन आमाबाबुहरूले ख्रीष्टियन नानीहरू जन्माउँदैनन्। नयाँ जन्म पाएका बाबुआमाहरूका नयाँ जन्म पाएका छोराछोरीहरू जन्मँदैनन्। यदि तपाईंको पनि कुनै ख्रीष्टियनसँग रगतको नाता पर्छ भने यसले तपाईंलाई ख्रीष्टियन बनाउँदैन। मुक्ति आमाबाबुबाट छोराछोरीमा सर्ने कुरा होइन।
(२) "न ता शरीरको इच्छाबाट"
मानिसको सम्पूर्ण ताकत र सार्मथ्यले उसलाई कहिल्यै परमेश्वरको सन्तान बनाउँदैन। येशूले भन्नुभयो “शरीरबाट जन्मिएको चाहिँ ____________ हो” (यूहन्ना ३:६)। अहो, मानिसहरूले जतिसुकै बदलिने आकांक्षा राखे पनि, उसले आफैलाई बदल्न सक्दैन। जसरी चितुवाले आफ्ना टाटाहरू बदल्न सक्दैन, अनि इथियोपियाको मानिस (अफ्रिकी) ले आफ्नो छालाको रंग बदल्न सक्दैन, त्यसरी नै पापी हृदय भएको मानिसले आफ्नो दुष्ट स्वभावलाई बदल्न सक्दैन (यर्मिया १३:२३ मा हेरौं)। यस्तो परिवर्तन परमेश्वरले मात्र ल्याउन सक्नुहुन्छ।
(३) "न ता मानिसको इच्छाबाट"
सुरुका ख्रीष्टियनहरू धेरै बर्ष रोमी सम्राटहरूबाट सताइए अनि धेरै मारिए। आखिरमा सत्ता कन्सटेन्टाइनको हातमा पर्यो (करिब ३०० ई .सं . तिर)। उसले ख्रीष्टिय “धर्म” लाई साम्राज्यको आधिकारीक धर्म बनाउन चाहे। उनले आफ्ना राज्यका सबैजना ख्रीष्टियन हुनुपर्छ भन्ने इच्छा गरे, तर के यसले सबैलाई ख्रीष्टियन बनायो त? ______________। हो, राजा होस् वा राजकुमार अथवा पूजाहारी वा पोप होस् वा पाष्टर, कसैले पनि एक व्यक्तिलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउन सक्दैनन्। पृथ्वीको सबभन्दा शक्तिशाली मानिसले पनि एक व्यक्तिलाई शुद्ध हृदय र नयाँ जीवन दिन सक्दैन। परमेश्वरले मात्र यो काम गर्न सक्नुहुन्छ।
यूहन्ना ३:८ मा येशूले परमेश्वरका आत्माका कामलाई हावासँग दाँज्नुहुन्छ। हावा अदृश्य हुन्छ अर्थात् यसलाई देख्नन सकिँदैन। हावालाई तपाईं देख्न_ सक्नुहुन्न तर हावाले गरेको कामलाई देख्न। सक्नुहुन्छ। तपाईं रूखका पातहरू हल्लिरहेको देख्नुशहुन्छ। डोरीमा सुकाइएको लुगालाई हावामा हल्लिरहेको देख्नुहहुन्छ। सिर्र चलिरहेको बतासमा झण्डा फर्फराइरहेको पनि देख्नुशहुन्छ।
परमेश्वरको आत्मा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। एकजना ख्रीष्टियनलाई हेर्दैमा तपाईं परमेश्वरको आत्मालाई देख्नेसक्नुहुन्न, तरैपनि उहाँको कामचाहिँ देख्ने सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले एक व्यक्तिको जीवनमा साँच्चै काम गर्दैहुनुहुन्छ भने त्यो देखिनुपर्छ। आफूभित्र पवित्र आत्मा बास गरिरहनुभएको मानिसहरूले देख्नम सक्दैनन्, तरैपनि के तिनीहरूले आत्माका फल देख्नत सक्छन् (गलाती ५:२२ -२३, एफेसी ५:९)? ___________। निश्चय नै, मानिसहरूले हाम्रो जीवन देख्न सक्छन्, अनि बोली र व्यवहार देख्न- सक्छन् अनि तिनीहरूले हाम्रो जीवनमा आत्माले काम गरिरहनुभएको प्रमाण देख्न‍ सक्छन्। के तपाईंको दिनप्रतिदिनको जीवनमा, तपाईंको बोली र व्यवहारबाट आत्माको “आवाज” सुन्न सकिन्छ?